Nakaton’ny China Telecom ny RSS FeedBurner · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2019 3:18 GMT
Pikantsarin'ny FeedBurner nakaton'i China Telecom tao amin'ny williamlong.info
Notaterina fa tsy afaka miditra ao amin'ny FeedBurner intsony ireo olona mampiasa ny China Telecom. FeedBurner, izay efa novidian'ny Google Inc hatramin'ny volana jona 2007 no mpamatsy lehibe ny RSS, mampandeha ireo bilaogy an'arivony maro, podcast (fandraketam-peo) ary famahanam-baovao (27 Aogositra 2007: Mamahana mpamoaka vaovao 535 003 izay efa nandoro (burn) fahana miisa 913.490 ny Feedburner ).
Nahita ny Moon-Blog, izay nanao fanarahan-dia avy any Shina mba hanamarina ny fanakatonana fa tsy nahomby teo amin'ny sehatra “backbone” [hosina] tao Shina ny fanarahan-dia, voasakan'ny IP 202.97.33.110. “Ity adiresy IP ity no “router” lehibe an'ny China Telcom. Manamafy izany fa mandeha ny fanakanana ny IP amin'ny Great Fire Wall,” hoy izy, ary nanampy hoe” satria ny Feedburner no manome votoaty avy amin'ny tranonkala tsy tambo isaina. Dia mety hitondra ny vaovao sasantsasany izay heverin'ny manampahefana Shinoa fa tsy tokony ho izy izany. Noho izany dia miezaka manakana azy ry zareo. “
Trace Route FeedBurner nataon'ny Moon-Blog
“Mihoatra lavitra noho ny fanakanana tolotra blaogy tahaka ny TypePad izany ary tsara jerena. Mety ho marika korontana lehibe ho an'ny RSS ao Shina izany,” hoy i Steve Rubel, mpanoratra ao amin'ny Micro Persuasion.
ireo mpanangonm-baovao sy RSS, toy ny FeedBurner, Google Reader sy Bloglines dia ahafahan'ny mpisera aterineto misoratra anarana sy mijery ny votoaty avy amin'ireo loharanom-baovao voafaritra manokana. Any amin'ireo firenena manao sivana amin'ny aterineto, ampiasaina ireo mpanangom-baovao sy RSS mba hialàna amin'ny sivana sy hidirana amin'ny votoaty nivoaka tamin'ny tranokala voasakana.